TOMATO OZHAROVSKY RASPBERRY - SI AY U KORAAN SI FUDUD: DESCRIPTION OF KALA DUWAN, TALOOYINKA KORITAANKA - BEER CAGAARAN
Waxaan koraan yaanyo badan oo soo saaro "Osharovsky raspberry": sharaxaada kala duwan, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Yaanyada rosiyadu waxay ku raaxaystaan ​​jacayl u qalalan ee bannaanka u hiwaayadda. Yaanyadaas badanaa waxay ku kala duwan yihiin dhadhan wanaagsan, waxay yihiin fareem, casiir leh, oo ku habboon cunto karinta kala duwan, waxaana si gaar ah loogu talinayaa cunnuga cuntada.
Ka mid ah yaanyada casaan-casiir, Ozharovsky Raspberry, noocyo badan oo wax-u-qabatinka iyo daryeel-fudud, waxay qabataa meel gaar ah. Maqaalkeena waxaan kuu sheegi doonaa si faahfaahsan wax kasta oo aan ka ogaanno kala duwanaanshahan. Halkan waxaad ka heli doontaa sharaxaadkeeda, si aad u ogaato astaamaha, waxaad arki kartaa sida tamaandhada u eegto sawirka.
Tomato Raspberry Ozharovsky: sharaxaadda kala duwan
Magaca dugsiga Ozharovsky Raspberry
Sharaxaad guud Darajo horay loo siiyay oo heer sare ah oo macquul ah
Bisaylka 100-110 maalmood
Foomka Foomka ayaa la moodaa, la isku dhajiyaa, oo uu yeesho foorida daciifka ah ee asliga ah
Cunto dhexdhexaad ah 100-300 garaam
Noocyo dhaadheer 6-7 kg oo baadiyaha ah
Tomato Ozharovsky Dambiga - heer sare ah oo dhalaalaya heer sare ah. Burburin baadiyaha, xoog badan oo faafaya, gaaraya 2 m ee dhererka. Caleen waa mid waaweyn, cagaar mugdi ah, baradhada. Tamaandho waxay u bislaadaan dhir weyn oo ah 9-12 gogo ', gaar ahaan kooxo waaweyn oo ay ka mid yihiin ilaa 14 miro.
Sidoo kale akhri qiyaasaha kala-go'aanka, kala-go'aamiyaha iyo noocyada kala duwan ee yaanyada ee maqaalkani.
Ozharovsky Caspis kala duwan oo yaanyo ah Large, oo miisaankeedu yahay 100 illaa 300 g. On the laamaha hoose u bislaadaan miraha ka weyn. Foomka ayaa la moodaa, la isku dhajiyaa, oo uu yeesho foorida daciifka ah ee asliga ah.
Midabka ee yaanyada bislaado waa casaan raspberry rasmi ah. Maqaarku waa dhuuban yahay, ma ahan mid adag, si fiican ayuu u ilaaliyaa midhaha dillaac. Saxarka waa dhexdhexaad ah oo casiir leh, oo leh tiro yar oo ah miraha, fareeshka, sonkorta fasaxa. Dhadhanka waa mid aad u fiican, macaan. Qodobka sare ee sonkorta iyo acids amino qiimaha leh waxay noo ogolaanaysaa inaan kugula talinno miraha cunugga ama cuntada cuntada.
Waxaad isbarbar dhigi kartaa miisaanka midhaha kala duwan ee kala duwan kuwa kale jadwalka hoose:
Kansar Ozharovsky 100-300 garaam
Sidoo kale akhri websaydheena: Waa kuwee noocyo yaanyo ah oo aad u sarreeya oo iska caabiya cudurrada ugu waaweyn ee habeenkii?
Maxaad u baahan tahay inaad ogaato si aad u hesho dalag aad u fiican oo tamaandhada ah ee bannaanka u furan?
Kala duwan yaanyo Ozharovsky Malinovy ​​oo la yiraahdo beeraha Ruushka. Ku haboon dhammaan goobaha, oo ay ku jiraan waqooyiga. Waxaa loogu talagalay sii kordhaya lagu koriyo, lagu koriyo filim.
Gobollada leh jawi diirran, waxaa suurtogal ah in dhulka la gooyo. Wax-soo-saarka ayaa sareeya, 6-7 kg oo yaanyo la xushay ayaa laga saari karaa 1 baadiyaha.
Kansar Ozharovsky 6-7 kg oo baadiyaha ah
Solerosso F1 8 kg mitir labajibbaaran
Labrador 3 kg oo baadiyaha ah
Aphrodite F1 5-6 kg ka baadiyaha
Locomotive 12-15 kg halkii mitir labajibbaaran
Severenok F1 3.5-4 kg ka baadiyaha
Cibaadadu waa caajis 8 kg mitir labajibbaaran
Wakhtiga khudradda ayaa la kordhiyey bilawga bilawga illaa Oktoobar. Miro la soo goostay ayaa si fiican loo kaydiyaa, gaadiidku waa suurtogal.
Miraha fareeshka ah waa kuwo cusub, waa loo isticmaalaa karinta cuntada. Yaanyada bislaado waxay sameeyaan suugo delicious, baradho la shiiday, macmacaan, casiir, kuwaas oo loo isticmaali karo kuwo cusub oo la diyaariyey ama qasacadaysan.
yaanyada waa mid caalami ah, oo ku haboon saladh iyo caanaha;
si sahlan u dulqaadanaysaa dabka qabow;
iska caabida cudurada ugu weyn ee yaanyada ee lagu koriyo.
Dhibaatooyinka kala duwan ee kala duwan:
baahida loo qabo in la sameeyo oo xiro baadiyaha;
dalabka sare ee qiimaha nafaqada ee ciidda.
Si aad u fahamtid sida loo bacrimiyo yaanyada, akhri taxane maqaalo ah mawduucan:
Macdanta, qasacadeysan, dabiici ah iyo Bacriminta diyaarsan.
Sida loo quudiyo dhirta iyadoo la isticmaalayo ash, boric acid, ammonia, iodine, khamiir.
Bacriminta for yaanyada marka picking, for geedo, dhejinta foliar.
In sawirka aad ka arki kartaa yaanyo Raspberry Ozharovsky:
Kala duwan yaanyo Ozharovsky Raspberry waa la kori karaa seedling ama seedless. Seeds for geedo lagu beeray qeybtii labaad ee March. Ka hor inta aan la beeri, waxaa lagu daaweyn karaa kiciyaha kobcinta ee biqilka ka fiican..
Carrada for geedo waxay ka kooban tahay isku dar ah ciidda beerta leh humus. Seeds lagu beeray qoto dheer oo ah 2 cm, lagu buufiyo biyo, kadibna lagu meeleeyo kuleylka. Sprouts dhalaalaya ka dib markii muuqaalka kore ee labada koowaad ee caleemaha runta ah, ka dibna iyaga ku quudi bacriminta adag oo adag.
Iyada oo habka aan macallin, abuurka lagu beeray aqalka dhirta lagu koriyo, ciidda horay ayaa loo bacrimiyey qayb ka mid ah deeqsinimo ee humus. 1 kiiloomitir. Meter wuxuu ku dabaqi karaa 4 dhirta.
Tamaandho waxaa loo waraabiyaa si dhexdhexaad ah, ururinta waraabka faleebo waa suurad wacan. Tamaandho waxay bacrimiyaan 2 asbuuc walba, isku dhafka macdanta iyo waxyaabo dabiici ah.
Si kor loogu qaado dhalidda, yaanyada waxay sameeyaan 1-2 afkoda, ka saara tallaal kor u kaca 2 burush. Ubaxyo dibedda ah ayaa laga saaraa inflorescences. Dhirta waxaa lagu xiraa taageerooyinka, habka ugu haboon ee loogu talagalay inay ku koraan trellis.
Sidoo kale akhri boggayaga internetka: Sababta loo kobciyo kicinta, fungicides iyo sunta cayayaanka ayaa loo baahan yahay marka koraan yaanyada.
Mawduucyada beeraha ee yaanyada leh Bisaylkiisa hore.
Cudurada iyo cayayaanka: hababka ka hortagga iyo xakamaynta
Is-beddelidda cudurada waaweyn, marar dhif ah ayay ku dhacdaa fusarium, verticillus, maasuuda tubaakada. Wixii ka hortagga dhirta goor dambe, waxaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo beeritaanka leh diyaar garowga. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan tallaabooyinka ilaalinta ee qodobkan.
Ka hortag dhacdooyinka ciriiriga, cawska ama rootka rootiga ayaa caawin doona inta badan hawo-qaboojinta aqalka dhirta lagu koriyo, loosinta ciidda leh jaridda dhirta. Waxaa faa'iido leh in mudadiiba ku buufin beeraha leh xal casaanka leh ee casaanka ah ee kaneecada ama phytosporin.
Cayayaanka kiimikada ayaa ka caawiya cayayaanka xayawaanka, iyo sidoo kale dawooyinka dadka: saabuun, ammonia, decoction of celandine, chamomile ama diirka basasha.
Daawooyinka sunta ah waxaa la isticmaali karaa oo kaliya ka hor inta ubax.
Raspberry Ozharovsky yaanyo - dalbashada daryeelka, laakiin noocyo badan oo miro leh. Bannaanka u tixgeliyaa mid ka mid ah tamaandhada ugu wanaagsan Rose rose, ku filan meel meel kasta oo lagu koriyo ama aqalka dhirta lagu koriyo.
Xilliga bartamaha Gaar ahaan hore Dhaqdhaqaaqa-dillaac
Anastasia Budenovka Ra'iisul wasaaraha
Khamri qallajin ah Dabeecadda qarsoodiga ah Grapefruit
Hadiyad royal ah Pink boqorkii De Barao Giant
Sanduuqa Malachite Cardinal De Barao
Wadnaha guduudka Aabaha Yusupovskiy
Waa mid weyn Danko Gantaal